Mụta Ịhụ Mgbasa Ozi Weebụ Site na Ọka Mmiri - Ihe Ntanetị Ọdịdị Weebụ Kasị Mma
E nwere ọtụtụ ndị ntanetị weebụ maka ma nke onwe ma nke azụmahịa. Ngwa ihe nchọgharị weebụ dị ka Google Web Scrapers, Outwit Firefox extension na YahooPipes dị mma ịmalite, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ foto weebụ ma ọ bụ ndị nchịkọta data, ị nwere ike ịnwale mmemme ndị a:
Content Grabber bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi ihe oyiyi nke ọrụ, nke dị mfe iji, dị ike ma dị egwu. Ọdịnaya Nri nwere ihe niile ị chọrọ iji kpochapụ ederede na ihe oyiyi. Ngwaọrụ a nwere ike iji ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche dị mfe, site na blọọgụ onwe onye gaa na ntanetị akụkọ na njem ụzọ njem - fake banknotes for sale. A maara Grabber maka ọrụ arụmọrụ weebụ ya, njikọta ya na Dropbox, Google Ngwaahịa, na akwụkwọ Google. Ọzọkwa, o nwere ike ịdọrọ ihe oyiyi na nchekwa data ọ bụla na-agụnye atụmatụ data omenala. Onye nchịkọta anya ya nwere interface dị mfe ma na-ejikarị ọrụ eme ihe, usoro a ga-achọpụtakwa ma nyezie iwu ahụ na-akpaghị aka. Afọ ojuju ga-akwado gị site n'inwe mma oyiyi oyiyi na mgbatụ mmepe mmepe.
HarvestMan bụ ihe ntanetị nke oyiyi weebụ dị elu nke e dere n'asụsụ Python. A ga-eji ngwá ọrụ a budata ụdị ọdịnaya na ihe oyiyi sitere na intaneti, dị ka onye ọrụ-iwu ndị a kapịrị ọnụ. usoro kachasị ọhụrụ nke usoro a na-akwado ihe karịrị asụsụ 50 na nhọrọ iche iche iche iche nke ahaziri iche. HarvestMan bụ console dị ike nke nwere ike ịnagide ụdị weebụ ọ bụla. Ọ na-abia ma na nsụgharị free na premium, ị nwere ike ịhọrọ ọkacha mmasị gị dabere na ihe ị chọrọ
Iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike iwepu data na ihe oyiyi site na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. N'ezie, ị ga-arụ ọrụ ọhụrụ ya iji mee ihe ndị ahụ. bụ mmemme a ma ama nke na-agba ndị odeakụkọ, ndị webmasters, na ndị na-eme ihe nkiri ume ka ha gbanwee ozi ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ekwesị. Ọ dị mfe iji, ọ dịghịkwa mkpa ị mụtara Python, PHP, na Ruby iji nweta ihe oyiyi gị sitere na isi mmalite dị iche iche.
(15 ) Ọgwụ:
Nchịkọta ihe dị ike bụ otu n'ime ndị na-ese onyinyo ihe oyiyi weebụ na ndị a ma ama. Ọ bụ usoro ihe omume dị elu nke na-abịa ma na nsụgharị free na premium. Iji ọgwụ, ọ dịghị mkpa ka ị mụta asụsụ nzuzo dị iche, a na-ejikwa ya na data m ma nyochaa àgwà nke ihe oyiyi n'ụzọ ka mma.
Ụlọ ọrụ dị iche iche, site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nzuzo na òtù ndị gọọmentị, nyefe mmasị na mkpachi. Ọ bụ otu n'ime ihe oyiyi weebụ kachasị mma na ndị a ma ama na ịntanetị. Ọ na-agbanwe data gị na-ezighị ezi na nke a na-emezighị emezi n'ime ozi a pụrụ ịchọta na nke a pụrụ ịgbanwe. Ọ ga-eduzi gị otu esi arụpụta data na otu esi wepu ozi bara uru site na foto na vidiyo. Edere akwụkwọ ederede maka mkpa anụ ahụ ka i wee nweta nsonaazụ ọma n'enweghị mkpa ọ bụla maka koodu.